ကံမကုန်သ၍ (ဉာဏ်သစ်) – NDSP Publishing
Home / Novel / ကံမကုန်သ၍ (ဉာဏ်သစ်)
This delightful book is the latest in the series, this is the story of howatall, shy youth from Weston-super-Mare went on to becomeaself-confessed legend.
Category: Novel Product ID: 1943
အခုစာအုပ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်ပြိုင် စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရာကို ရှားရှားပါးပါးအဖြစ် မြန်မာဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဆို ထုတ်ဝေရာမှာလည်း မူရင်းထိုင်းစာရေးဆရာဆီကနေ ဘာသာပြန်ဆိုခွင့် တရားဝင်ရယူကာ ထုတ်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံမကုန်သရွေ့ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဟာ ထိုင်းစာရေးဆရာရဲ့ လုံးချင်း ၀တ္ထုဖြစ်ပေမယ့် ဇာတ်အိမ်ကို မြန်မာပြည်ကို အခြေပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေးသမားများ၊ လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ နာမည်ရင်းများကို အသုံးပြုကာ စိတ်ကူးယဉ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ စွန့်စားခန်း ၀တ္ထုတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးကနေ အစပြုလို့ ဇာတ်သိမ်းတဲ့အထိ နယ်စပ်တိုက်ပွဲများ၊ ပြည်တွင်း တိုက်ပွဲများကို အခြေတည်ကာ စိတ်လှူပ်ရှားဖွယ်ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကြီး တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုထူးခြားတာကတော့ မူရင်းစာရေးဆရာ Paul Adirex ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာရေးသူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရေးလောကမှာ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ထိုင်းအမျိုးသားပါတီကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ဖြစ်ပြီး ယောက်ဖဖြစ်သူဟာလည်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်ဟာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအရေးကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ဖူးသူ တစ်ဦးပါ။
အညိုမှသည် ကြက်သွေးနီသို့ (မသီတာစမ်းချောင်း)
နှောင်ကြိုးမဲ့ တွယ်ငြိခြင်း (ခင်သန္တာ)
တစ်ကိုယ်စာလမ်း မြောက်ဖျားစွန်းသို့ (နိုင်စွမ်း)
NDSP © 2020. All rights reserved.